အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “2015 ခုနှစ်၏ကျွန်တော်တို့ရဲ့အများဆုံးမျှော်လင့်ဗီဒီယိုဂိမ်း” ကိသ်ဖြစ်သူ Stuart ကရေးသားခဲ့သည်, theguardian.com တနင်္လာနေ့ 29 ဒီဇင်ဘာလတွင်အပေါ်များအတွက် 2014 10.57 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
အကယ်. 2014 ဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့ငြ်ကူးေူပာင်းမြဆိုင်ရာနှစ်တွင်ခဲ့, 2015 အဓိက developer များနှင့်ကြေညာသူနောက်ဆုံးမှာလက်ရှိ consoles စနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ groove သို့ရတဲ့တွေ့မြင်နိုင်. နှစ်ဦးစလုံး PlayStation4နှင့် Xbox One မှာသူတို့ရဲ့ slates တွေပေါ်ကအကျယ်အလားအလာခေါင်းစဉ်များ, ကို Nintendo ကအဓိက In-အိမျတျောကိုဘဏ်ဍာနှင့်အတူ၎င်း၏လူနာ Wii U ပိုင်ရှင်တွေအမှတ်လက္ခဏာတွေအကြောင်းနေစဉ်. ထိုအခါသင်တန်း, က PC ကွန်ပျူတာနှင့်၎င်း၏ကြီးစိုးဒစ်ဂျစ်တယ်ဂိမ်းပလက်ဖောင်းနောက်ထပ်ရီစရာအလုပ်များတစ်နှစ်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားင်, ရနှေးငှေ့.
ဒါကဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်, ဒါကြောင့်သဘာဝအဇယားစိုးမိုးနိုင်ရန်အတွက်ပတ်ပတ်လည်ငွေသား၏ကြီးမားသောလိပ်ခေါင်း chucking အိုမင်းဂေါလျတ်၏ဂိုဏ်းရှိလိမ့်မည်. ရှေ့တန်းမှာ, လန်ဒန်ရဲ့ Rocksteady Studios ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံး Batman ခေါင်းစဉ်ရှိပါတယ်, Arkham Knight ဟာ တက်စီတန်း, နှင့်သူ၏ကား - - တကျယ်ပြန့်ဖွင့် Gotham အတွက်အမည်မသိစူပါဗီလိန်ဆန့်ကျင် Cape လူတစ်ယောက် pitching. လည်းရှိပါတယ် Metal Gear Solid V ကို: Phantom Pain, သော Venom မြွေဆိုဗီယက်အပြင်းအထန်အသေးစိတ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတစ်စီးရီးပတ်ပတ်လည် sneaks, နှင့် Star Wars: စစ်မြေပြင်က, Battlefield developer များ EA ၏အန်စာတုံးကို Star Wars ဝဠာကိုမှ၎င်း၏ visceral သေနတ်သမား action ကိုရောက်စေဖို့ကတိပေးထားသည့်အတွက်. (အန်စာတုံးလည်း၎င်း၏အစွန်းရောက်သိပ္ပံဝတ္ထု parkour-ပွဲတော်တွင်ကြေးမုံရဲ့ Edge ၏ပြန်လာအလုပ်လုပ်သည်, ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘို့သင့်အသက်ရှုကိုင်ကြပါဘူး။)
sexy ဘဏ္ဍာကိုမုဆိုးယခုနှစ်အလွန်အမင်းတွက်ဆလိမ့်မည်. စဉ်တွင် Uncharted 4: တစ်ဦးကသူခိုးရဲ့အဆုံး နာသန် Drake ရဲ့ Adventures အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏ဆည်းဆာမှတ်တမ်းတင်ရန်သတ်မှတ်, အ Tomb Raider ၏ထ (တစ်ဦး Xbox One မှာသီးသန့်အချိန်ကျော်လွန်သွား console ကိုအပေါ်, ရဲ့မေ့လျော့တော်မမှတ်စေနှင့်) အားလုံး Lara Croft ရဲ့အစအဦးအကြောင်း. နှစ်ဦးစလုံးရုပ်ရှင် action ကိုစွန့်စားမှုအမျိုးအစားအသစ်ချမှတ်ထားသောသတ်မှတ်ချက်များကိုသတ်မှတ်သင့်ပါတယ်. sexy အမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. Talking, အရွယ်ရောက်ပြီးသူ-orientated အခန်းကဏ္ဍ-ကစားမော်ကွန်း Witcher3ကောင်းစွာယခုနှစ်ရဲ့ Grand Theft Auto ဖြစ်နိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့် crunching အကြမ်းဖက်မှုများနှငျ့အတူရှိ၏ကဲ့သို့၎င်းပြည့်ဝ, စိတ်ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့… ရဲ့ "ညျမတ်ေတာဆက်ဆံရေး" ဟုမဆိုစေ. ကျနော်တို့လိင်ဆိုလို.
တစ်ဦးပေါ့ပါးမှတ်ချက်တွင်, Nintendo အနှင့်အတူ၎င်း၏ခိုင်ပြေးဆက်လက်သတ်မှတ် Zelda သစ်ဒဏ္ဍာရီဇာတ်လမ်းများ ခေါင်းစဥ်, အရာဖော်မြူလာဖို့ကအဓိကလှုပ်ရှား-up ကကတိပေးထား, စစ်မှန်သော Open-ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်အပါအဝင်, နှင့်ပိုပြီးရင့်ကျက်အနုပညာစတိုင်လ်. ငါတို့သည်လည်းများ၏ကြည့်ရှုခစျြ Yoshi ရဲ့ Woolly ကမ္ဘာ့ဖလား, Kirby ရဲ့ Epic ချည်ခင်ရဲ့ style အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ handicrafty ပလက်ဖောင်း, နှင့် မာရီယိုသည်ဖန်ဆင်းတော်မူသောဘုရားကို, သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်စူပါမာရီယိုအဆင့်ဆင့်တည်ဆောက်ပေးပါတယ် Wii U အဘို့ဖန်တီးမှု tool ကို. ထိုအခါမမေ့မလြော့ပါ Splatoon, Counter-Strike မှ Nintendo ရဲ့မဖြစ်နိုင်အဖြေ.
ခေတ်ရေစီးကြောင်း debutantes တစ် flirtatious gaggle ကြားထဲက, ကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်အကြောင်းမထွက်င် တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲ, ထိုအချိုးမညီ multiplayer သိပ္ပံဝတ္ထုသေနတ်သမား, ရာလေးကစားသမားမုဆိုးနှင့်တစ်ခုလျှင်မြန်စွာပြောင်းလဲအာကာသနဂါးသည်. လက်ဝဲဘက်4သေလွန်သောသူတို့သည်ဖန်ဆင်းရှင်လိပ်ကျောက်ထရံ Studios ကပဲသူ့ရဲ့သွေးစွန်းထင်းလက်ပေါ်မှာယခုနှစ်အွန်လိုင်း hit ရှိစေခြင်းငှါ.
မှခိုင်မာသောယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိပေမယ့် တွမ် Clancy ၏ The ဌာနခွဲ, ခေတ်မီဘေးဖြင့်ပျက်စီးတဲ့အနီး-အနာဂတ် America မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့သမဝါယမအသင်းအခြေစိုက်မဟာဗျူဟာသေနတ်သမား. ဒါဟာအားလုံးတစ်ဦးဇွဲပတ်ဝန်းကျင်အတွက်သတ်မှတ်ထားင်, ပြောင်းလဲနေသောဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံ, ဘယ်မှာရှင်သန်ရပ်တည်ရေးဒြပ်စင်များနှင့်ကုန်သွယ်ထိုနည်းဗျူဟာ action ကိုတိုးပွား. ဝိညာဉ်တော် Recon DayZ တွေ့ဆုံစဉ်းစားပါ.
DayZ ၏ဘာသာရပ်တွင်, ကျွန်တော်တို့ဒင်းခန်းမရဲ့ဖုတ်ကောင်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးဂိမ်းယခုနှစ်ပိုပြီးကြားမှာတဆင့်သွားကြဖို့မြျှောလငျ့နိုငျ; ကရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာ Los Angeles မြို့အခြေစိုက်နောက်ဆက်တွဲသေကျွန်းအပါအဝင်အခြားမှာတော့ဖုတ်ကောင် lurkers ဖြင့်လိုက်ပါသွားပါလိမ့်မယ်2နှင့် Techland ရဲ့ပွင့်လင်းကမ္ဘာ chiller, သေဆုံးအလင်း.
ဂျပန်ကနေအဓိကအမျိုးအစားဟဲဗီးဝိတ်တစ်နှစ်လုံးလာ. Bayonetta ဖန်ဆင်းရှင်ပလက်တီနမ်ဂိမ်းများက၎င်း၏ဧရာမနဂါးသတ် combo romp ရှိပါတယ် Scalebound စွဲချက်တင်ခြင်းနှင့်ပျံသန်းဖို့အဆင်သင့်. မှောင်မိုက် Souls ဝါသနာရှင်များလည်းအဘို့မိမိတို့အချိန်ဇယားထဲမှာနာရီရာပေါင်းများစွာပြင်ဆင်နေပါလိမ့်မယ် Bloodborne, လွန်စွာမှရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပါရမီ Hidetaka မီယာဇာကီကနေနောက်ဆုံးလွှတ် action ကိုစွန့်စားမှု, Lovecraftian ထိတ်လန့်တစ်ဦး goth ပန့်ခ်ကမ်ဘာ​​ပျေါတှငျ ထား. ဤအချိန်.
နောက်ဆုံး, အချို့သောစိတ်ဝင်စားဖွယ် console ကိုသီးသန့်ရှိပါတယ်. Sony ကသူ့ရဲ့ဗစ်တိုးရီးယား-set သည်းထိတ်ရင်ဖိုရှိပါတယ်, အဆိုပါအမိန့်: 1886, Microsoft ကကုစားနည်း Entertainment ရဲ့ transmedia သိပ္ပံဝတ္ထု romp တိုက်ဖျက်မည်ဟုသတ်မှတ်နေစဉ် ကွမ်တမ်လူငယ်များသို့. တစ်ဦးထိပ်တိုက်တွေ့အဖြစ်, ကအနည်းဆုံးနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြား vs နေဝင်ချိန် Overdrive ထက်ပိုမိုတိုးတက်သောဖြစ်သင့်: ဒုတိယအသားတော်ကို.
အဆိုပါ Indie မျှော်လင့်ချက်
သူတို့ရဲ့ Indie အထောက်အထားများသက်သေပြဖို့အပူတပြင်းအားလုံးအဓိက console ကိုထုတ်လုပ်သူများနှင့်အတူ (လာမည့် Minecraft မှလာသည်အဘယ်မှာရှိသင်သိဘယ်တော့မှ, နောက်ဆုံးတော့), 2015 သေးငယ်တဲ့စတူဒီယိုများအတွက်အခြားစန်းတစ်နှစ်ဖြစ်သတ်မှတ်.
အဆိုပါအာကာသတူးဖော်ရေး sim အဘယ်သူမျှမက Man ရဲ့က Sky ယခုနှစ်အဘို့လူတိုင်း၏မဖြစ်မနေ-များစာရင်းပေါ်တက်လှည့်ခဲ့သည်, တစ်ကျယ်ပြန့်ကြွား, အစားဖျက်ဆီးခြင်းထက်လွတ်လွတ်လပ်လပ် Explorer စကွဝဠာနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတခုတခုအပေါ်မှာအလေးထား. ယောနသန်သည် seminal Indie မှ-up ကအတိုင်းလိုက်နာရဲ့မှုတ်ကျစ်လည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလှပါတယ် hit - သကျသခေံ PC ကွန်ပျူတာဂန္ Myst အပေါ်တစ်ဦးသည်ခေတ်သစ်ယူအရိပ်အမြွက်တဲ့လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ကျွန်းပေါ်မှာတစ်ဦးပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး puzzler အစုံသည်.
ထိုအခါသင်က Mike Bithell ရဲ့ရရှိပါသည် Volume ကို, ထိုရော်ဘင် hood ကိုဒဏ္ဍာရီ၏ cyberpunk ဗားရှင်းတစ်မျိုးအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကိုယ်ပျောက်စွန့်စားမှု. နဲ့ Xbox One တွင်, ကျနော်တို့အဘို့အမြင့်မားမျှော်လင့်ချက်ရှိ အောက်တွင်ဖော်ပြထား, တစ်ဦး Capy အားကစားပြိုင်ပွဲကနေ "roguelike" စွန့်စားမှုနှင့်များ၏ပလက်ဖောင်းစွန့်စားမှု Ori နှင့်မျက်စိကန်းသောသစ်တော မွန်း Studios ကအားဖြင့်, မိမိအအကြိုက်ဆုံးလာမည့်ခေါင်းစဉ်တစ်ဦးအဖြစ် E3 မှာ, Xbox အကြီးအကဲဖီးလ် Spencer အားဖြင့်မီးမောင်းထိုးပြ. ငါတို့အဘို့အ, သော်လည်း, ကအကြီးအကျယ်ညီလာခံ၏ဘဏ္ဍာတ အဝုဒ်အတွက်ညဥ့်အခါ, သူမရဲ့နောက်ပြန်ဇာတိမြို့ထွက်ခွာစဉ်းစားအဖြစ်စိတ်ပျက်လက်ပျက်ကြောင်အောက်ပါတစ်လှလှပပသရုပ်ဖော်စွန့်စားမှု.
ကွာ console ကစစ်ပွဲတွေကနေ, ကျွန်တော်တို့အများကြီးမျှော် Ethan Carter က 2014 ၏ The ကွယ်ပျောက်၏လိုင်းများတလျှောက်ပိုပြီးတစ်မူထူးခြားသောအတွေ့အကြုံ Adventures ရှာနေ. Firewatch အ Wyoming, တော၌သတ်မှတ်ထားသည့်ကျောချမ်းဖွယ်နက်နဲသောအရာသည်; နှင့် နေဝင်, ဘယ်လဂျီယံအနုပညာစတူဒီယိုအားဖြင့်, ပုံပြင်များ၏ပုံပြင်, သငျသညျတော်လှန်ရေးထိုအမည်ဖော်ပြထားခြင်းမရှိတောင်အမေရိကမြို့အတွက်တတ်စဉ်တစ်ခုတည်းတိုက်ခန်းစူးစမ်းလေ့လာရပါမည်သူတစ်ဦးသန့်စင်ကစားခဲ့သည်. အဆိုပါအစွန်းရောက်စတိုင်ပဟေဠိသေနတ်သမား SuperHot လည်းအံ့သြဖွယ်ကြည့်, မင့်က၎င်း၏ကျဲအမြင်အာရုံဗေဒများအတွက်, ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ feature ကို: အချိန်, ထို့ကြောင့်ရန်သူကျည်ဆံ, သာရွှေ့ကြသောအခါသင်တို့ပြု.
ဒါ့အပြင်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုအဲဒီမှာဖွစျလိမျ့မညျ. အဆိုပါ visceral ပေါက်ကွဲမှု-'em-up ကနောက်ဆက်တွဲ hotline မိုင်ယာမီ2မည်သည့်ကိုထိုးကြိတ်ဆွဲထုတ်သွားသည်မဟုတ်, ထိုရယ်စရာ multiplayer တိရစ္ဆာန် brawler မဟုတ် ဂိုဏ်းသားရဲ, အတွက်ပွဲတော် circuit ကိုအပေါ်တစ်ဦးထိခိုက်ခဲ့သည့် 2014 နှင့်လာမည့်နှစ်တွင် YouTube ကိုရွှေအဖွစျလိမျ့မညျ.
ကောင်းစွာ, ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မဖြစ်မနေ-မြင်စာရင်းအပေါ်ယျတဲ့အပိုင်းင်. မလွှဲမရှောင် Duty ၏အသစ်တစ်ခုကိုခေါ်ရန်ရှိလိမ့်မည် (ဖြစ်နိုင်က Black Ops စတူဒီယို Treyarch မှ); EA ၏အားကစားကြောင့်ဖီဖာ revolutionalising ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြလိမ့်မယ်; Halo5လာနေသည်, ခြော-to-ဖြစ်-အငြင်းပွားဖွယ်ကိုချော့တခါ, သေနတ်သမား Battlefield ဖြစ်သကဲ့သို့: အစွန်းရောက် (ဂိမ်းကြေငြာခဲ့သည်ကတည်းကရဲတပ်ဖွဲ့များ၏ militarisiation အတော်လေးခေါင်းစဉ်ဖြစ်လာသည်). အဘယ်သူသည်ကိုအရေးယူ reboot လက်ရှိ console ကိုမျိုးဆက်၎င်း၏မင်းမဲ့စရိုက်စာရွက် uodate လိမ့်မည်ကိုမည်သို့သိတ.
မြျှောလငျ့စှာ, သော်လည်း, လည်း leftfield အံ့သြဖွယ်များများရှိလိမ့်မည်. အဘယ်သူမျှမသတင်းစာများက၏အကြိုက်ကို ကျေးဇူးပြု. ကိုမြင်လျှင်, Papa & Yo သို့မဟုတ်ညီအစ်ကိုများ: နှစ်ဦးသား၏အဖြေပုံပြင်လာမယ့်, ဒါကြောင့်ဆင်တူလိုင်းများတလျှောက်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုစိန်ခေါ်မှုခကြည့်ဖို့အလွန်ကြီးစွာသောဖြစ်လိမ့်မယ်. ထိုအဟေး, E3 မှာပြီးခဲ့သည့်ဂါးဒီးယန်းကြေညာချက်၏အခွင့်အလမ်းကအမြဲတမ်းရှိပါတယ်. လာစမ်းပါ, င်း 2015 ယခု, အံ့ဖွယ်အဖြစ်ပျက်စေခြင်းငှါ.